सुशीलालाई जसले न्यायाधीश बनायो, उसैले गलहत्यायो/ यसरी भएको रहेछ- षड्यन्त्र ! – Complete Nepali News Portal
सुशीलालाई जसले न्यायाधीश बनायो, उसैले गलहत्यायो/ यसरी भएको रहेछ- षड्यन्त्र !
May 3, 2017	5,538 Views
स्रोत अगाडि भन्छ- ‘जयबहादुरलाई आइजीपी नबनाउ भनियो, हामीले बनाएनौं । कार्यसम्पादनका आधारमा बनाऊ, भनियो, हामीले त्यसै गर्‍यौं । यसवीचमा सिलवालले कीर्ते गरेको छानविनबाट पुष्टि भयो, उनलाई सुशीला कार्कीले नपक्र, छानविन नगर भनिन् । त्यसपछि अझै अगाडि बढेर उनी आफैं फुली लगाइदिन लागि परिन् ।